Malezia: Fitsipi-pitondrantena amin’ny rehefa mibilaogy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2019 8:02 GMT
Taorian'ny fisavorovoroana be teo amin'ny bilaogy Maleziana, nanolo-kevitra ny Minisitry ny Atitany, Datuk Seri Syed Hamid Albar vao haingana fa tokony hanangana fitsipika momba ny fitsipi-pitondrantena azy ireo manokana ny bilaogera mba hiantohana ny maha-tompon'andraikitra sy izay rariny amin'ny asa soratr'izy ireo. Nanamafy ny maha-zava-dehibe izany i Syed Hamid, izay nanokatra ny Fihaonamben'ny Bilaogera taona 2008 satria tsy manana fahalalana momba ny asa fanaovan-gazety ny ankamaroan'ny bilaogera.
Voalaza fa nilaza izao manaraka izao i Syed Hamid:
Blogging is indeed coming of age. These are exciting times and even the king of bloggers (Tun) Dr Mahathir Mohamad is enjoying it.
Tonga tokoa izao ny fotoana ibilaogiavana. Fotoana mampientam-po izany ary na ny mpanjakan'ny bilaogera (Tun) Dr Mahathir Mohamad aza mba mankafy izany.
Toa nilaza, hono, i Ahirudin Atan, izay mpandray fitenenana tamin'ny kaonferansa fa tokony hametraka ny fitsipi-pitondrantenany manokana tsy misy fitsabatsabahan'ny fanjakana ny bilaogera. Tany Indonezia nanatrika ny Hetsika Pesta Blogger ihany koa i Jeff Ooi, Maleziana mpanao politika lasa bilaogera, no sady filoha lefitry ny All-Blog protem ihany koa.